Wafdi ka socda Beesha Caalamka oo maanta tagaya Garoowe – Radio Daljir
Maarso 26, 2016 10:45 g 0
Wafti heer sare ah oo ka socda waddamada midawga Yurub iyo hay’ado caalami ah ayaa la filayaa maanta in ay yimaadaan Puntland, siiba magaalada Caasumadda ah ee Garowe.
Waftigaasi ayaa sida Radio Daljir loo xaqiijiyey u socda arrimo dhawr ah oo ay ugu muhiimsan tahay dhinaca hormarinta iyo dhisid kaabayaasha dhaqaale ee Puntland, taasoo ay ugu horrayso garoonka diyaaradaha ee caasumadda Garowe oo horay dhagax-dhiiggiisa loo sameeyey.
Warka ayaa intaas ku darayaa haatan in la fasixi doono dhaqaalihii dhismaha mashruuca garoonka diyaaradaha ee Garowe, gaar ahaanna qaybtii deeqeed ee dibedda, taasoo ah ujeedada waftigaan beesha caalamka ee maanta la filayo ay u imaanayaan.
Mashruuca dhisme ee garoonka diyaaradaha ee Garowe ayaa hirgalkiisu noqonayaa garoonkii labaad oo caalami ah oo Puntland ay yeelato labo sanno gudahood, taasoo qayb ka ah ballanqaadadii madaxdu dawladdu muddada ku celcelinayeen taabbogalintooda.
Wada hadalo u dhaxeeya DFS & Puntland oo maanta furmaya